Madaxwaynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid xildhibaan Aqalka Hoose ka tirsanaa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid xildhibaan Aqalka Hoose ka...
Madaxwaynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid xildhibaan Aqalka Hoose ka tirsanaa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyska, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allah ha u naxariistee Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo xalay ku geeriyooday magaalada Garoowe.
“Innaa Lillaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaan shacabka, qoyska, ehaladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah ha u naxariistee Marxuum Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle la wadaagayaa tacsidan murugada leh.
Waxaa marxuumka lagu xusuusan doonaan doorkii wanaagsanaa iyo sida hufan ee uu ugu adeegay shacabkiisa ” ayuu yiri Madaxweynaha.
Previous articleRW Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida xildhibaan Daahir Xaaji Geelle
Next articleXasan Sheekh oo xarriga ka jaray wadada Shaqaalaha